Olona vavanyo lwasekhaya oluhle lwabantwana- Ikkaro
yokuqalisa >> Iingcaphephe zaseKhaya >> Amalinge abantwana
Ngaphakathi kuvavanyo lwasekhaya kunyanzelekile ukuba kubekho indawo ekhethekileyo ekuthiwa yimifuniselo yasekhaya yabantwana. Zizilingo ezilula ezinokwenziwa ngabantwana bebodwa okanye bephakathi kwabantu abadala kwaye ziyilelwe ukuba zenziwe "ekhaya", oko kukuthi, ngokufikeleleka ngokulula kunye nezinto ezingabizi kakhulu.
Uvavanyo olulula kunye nokuyilwa, okuhlala kuphendula kwipropathi ebonakalayo kwaye esivumela ukuba singamangalisi abantwana nabantu abancinci kuphela, kodwa ikwacacisa nezinto ezibonakalayo emva kwezi mpendulo.
Kutheni kusenzeka nje, kwaye kwenzeka ntoni ukuba endaweni yale ndlela ndiyenza ngale ndlela? Okanye ukuba nditshintsha izinto / iimveliso?
Kuhlala kunomdla ukuba bajongwe ngabantu abadala kwaye hayi nje ukuqinisekisa ukhuseleko lomntwana kodwa nokumkhokela. Mncede ukuba acinge, azibuze imibuzo eyiyo. Kukunceda ufumane ulwazi kwaye usebenzise izixhobo onokuzifumana.
Kwaye okona kubalulekileyo kuko konke ukukwazi ukuvusa umdla wakho wokufuna ukwazi malunga nezinto kunye nehlabathi elisingqongileyo. Ukuyila, ukwazi, ukufunda kunye nomzamo omkhulu.
Ndihlala ndiluthanda olu hlobo lovavanyo kodwa kuba ndinabantwana ngakumbi :)
Ubunzima njengesiqhelo kukwazi ukuhambisa umxholo, amalinge kunye nezinto ezenziwe ekhaya zabantwana kunye, ngokwahlukeneyo.Kwaye kwenziwa iithoyi?
Ewe, yinto esinethemba lokusombulula kakuhle. Ndicinga ukuba sinomxholo olungileyo wokuhlelwa.
Konwabele kwaye uthathe ithuba ngeempela-veki ukuya kwenza ulingo esikushiya nabantwana bakho. Kwaye ukuba ungutitshala, ungathandabuzi ukubasa kwigumbi lokufundela.
Kwaye xa usenza into. Nceda uphawule kwaye usixelele ukuba ihambe njani.
Uyenza kanjani inkanyamba
Kule nqaku sishiya iindlela ezininzi zokuvelisa kwakhona inkanyamba encinci ekhaya. Iqukethe ukuvelisa i-whirlpool kwi ... Qhubeka nokufunda
Uyenza njani i-ink engabonakaliyo
Siyayiyeka iindlela ezintathu zokwenza inki engabonakaliyo ekhaya kwaye ngokulula.
Eyokuqala kwaye mhlawumbi olona lwazi lubanzi kukwazisa ukucheba uboya bentsimbi, esisusa kwizikere, incindi yelamuni kwaye mayiphumle phakathi kweentsuku ezisi-7 ukuya kwezi-15.
I-inki engabonakaliyo ene-lemon
Ukuvavanywa kwasekhaya okubonakalayo kubisi
Ndizifumene ndishukumise nale Imibala elula kunye nekhaya, yenziwe nge:
Iqanda lokuBuyisa-Uvavanyo lweKhemistry
Inomdla, i ulingo ukuba basithumele kwisikolo sentombi yam. Imalunga ne- ulingo olulula lokwenza nabantwana bethuNdiyazi ukuba ndibazisa njani umhlaba omangalisayo wesayensi, nangona oku mhlawumbi sinemeko yabo.
El umntu Yenziwe ngobuninzi beekhompawundi ezenza umsebenzi othile obalulekileyo nobalulekileyo, umzekelo i-calcium inomsebenzi wolwakhiwo (ukuqina kwethambo). Xa udipha ithambo elikhethiweyo kwaye uyishiye kangangeentsuku ezininzi, uyayibona indlela ethamba ngayo kwaye unokude ugobe okanye wophule ngeminwe. Kungenxa yokuba yenai-acetic acid (iviniga) isisombululo "seba" izimbiwa kwithambo ngokuphendula kubo kunye nokuvelisa, umzekelo, i-calcium acetate. Ngale ndlela, isixa se-calcium sinciphile, nto leyo ebangela i osteoporosis ngokugqithisileyo.